CAJIIB: Miyaad Rumaysan Kartaa In Ciyaartoyga Muslimka Ah Ee N'Golo Kante Uu Bixiyo Cashuur Ka Badan Shirkadaha Waa Wayn Ee Amazon Iyo Starbucks - Gool24.Net
CAJIIB: Miyaad Rumaysan Kartaa In Ciyaartoyga Muslimka Ah Ee N’Golo Kante Uu Bixiyo Cashuur Ka Badan Shirkadaha Waa Wayn Ee Amazon Iyo Starbucks
Xiddiga Chelsea N’Golo Kante ayaa saxiixay heshiis cusub oo shan sannadood ah oo uu sannadkii qaadanayo 15 milyan ginni, waxaana canshuurta uu bixin doono ay ka badan tahay inta ay bixiyaan wadarta shirkadaha waa weyn ee Amazon iyo Starbucks sida ay qortay jariirada Daily Mirror.
Kante oo 27 sanno jir ah ayaa iska diiday inuu ku kaco qiyaano canshuur oo mushaharkiisa loo mariyo shirkado ku yaala dalal bilaa canshuur ah sida lagu shaaciyay sir faafiyaha Football Leaks.
Heshiiska cusub ee uu saxiixay xiddiga khadka dhexe ee France ayaa waxa uu canshuur ahaan u bixi doonaa 6.7 milyan ginni sannadkii waana in ka badan canshuurta ay bixiyeen shirkadaha Amazon iyo Starbucks sannadkii hore kuwaasoo wadar ahaan siiyay dowlada Ingariiska 6.2 milyan ginni.
Arintaan ayaa waxa ay ceeb ku tahay shirkadaha Amazon iyo Starbucks kuwaasoo isticmaala wadooyin qarsoon oo ay ku bixinayaan canshuurta ugu yar.
Shirkada weyn ee online-ka Amazon ayaa 1.7 milyan ginni ka bixisay 79 milyan ginni oo faa’ido ah oo ay sameeyeen sannadkii hore halka shirkada coffee-ga ay 4.5 milyan ginni ka bixisay 162 milyan ginni faa’ido oo ay sameeyeen.
Kante ayaa dooran karay in boqolkiiba 20 mushaharkiisa in lagu bixiyo xuquuqda muuqaalka oo loo soo marsiiyo dalal bilaa canshuur ah oo shirkad looga sameeyay.
Laakiin waxaa la sheegay inuu diiday inuu talaabadaas qaado oo uu kaliya doonayo mushahar caadi ah oo aan laablaab laheyn.
Kante ayaa shalay lagu abaalmariyay heshiis shan sannadood ah oo cusub oo ku sii joogayo kooxda isagoo udub dhexaad u ah kooxda Blues tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Leicester City.
N’Golo Kante oo Koobka Adduunka la qaaday France xagaagii ayaa ku sii negaan doona Stamford ilaa iyo xilli ciyaareedka 2023 taasoo farxad u ah jamaahiirta kooxda Chelsea.
Xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay kooxda waxa uu fure u ahaa inay kooxda hanatay koobka Premier League iyadoo xilli ciyaareedkii ka sii horeeyay uu horyaalka si mucjiso ah la soo qaaday kooxda Leicester City.